Properties for Sale in Bago Region - Myanmar | iMyanmarHouse.com
All TownshipsBagoDaik-UKawaThanatpinWawNyaunglebinShwegyinPyayPaukkaungThegonShwedaungPadaungPaungdeNattalinZigonTharrawaddyGyobingaukLetpadanMinhlaMonyoOkphoTaungooOktwinTantabinYedashePyuKyauktagaKyaukkyiHpa Yar Gyi
Properties for Sale in Bago Region
Regions Bago Region
ခြံအကျယ် ၁ ဧက အကျယ်ရှိသောမြေကွက် လုံးချင်းအိမ်ပါ...
Bago	|	Bago Region
ခြံအကျယ် ၁ ဧက အက...
7,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-5957084
ခြံ မြေကွက် အမြန် ရောင်းရန်ရှိသည်။
100 Lakh (Kyats)
09 775033927, 09799409350
Ad Number S-6228424
(SL10-001510) 153မိုင်3ဖာလုံ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမပေါ်တွင် ဧက (20) မြေကွက်...
3,600 Lakh (Kyats)
Ad Number S-6224192
Rendezvous ko latt Real Estate Com.,Ltd. Close
Thanat Pin Street , (SL13-001310) For Sale Land in Bago Township
Ad Number S-6221111
Land for sale near Hantharwaddy Airport
400 Lakh (Kyats)
09 76338 3889
Ad Number S-6212009
Ad Number S-6170084
ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်း ၈၂ မိုင် ၂ ဖာလုံအနီး ဥယျာဉ်မြေ...
Ad Number S-6169913
(SL3-001511), 156 မိုင် 2ဖာလုံ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမပေါ်တွင် 32ဧက...
640 Lakh (Kyats)
Ad Number S-6158065
SL21-001674, For Sale Land, Bago Tsp တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။
26,250 Lakh (Kyats)
Ad Number S-6156300
SL23-001673, For Sale Land, Bago Tsp တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
58,600 Lakh (Kyats)
Ad Number S-6156178
6,500 Lakh (Kyats)
Ad Number S-6154697
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်ဒေသကြီး ၇ ခုတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးသည် ၃၉၄၀၂.၃ ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းသည် ။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏မြို့တော်မှာပဲခူးမြို့ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေး မြို့တော် ရန်ကုန်နှင့်အနီးကပ်ဆုံးတည်ရှိသော မြို့လည်းဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဖက်အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသောပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ကရင်ပြည်နယ် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်နှင့်နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိသည် ။ ပဲခူး ၊ တောင်ငူ နှင့် ပြည်မြို့တို့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအပူချိန်မြင့်သောနေရာဒေသများဖြစ်ကြသည် ။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအဓိကခရိုင်ကြီး ၄ ခုခွဲထားပြီးစုစုပေါင်း ၂၈ မြို့နယ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် ။ ပဲခူးတိုင်းဒေကြီးအတွင်းရှိပဲခူးမြို့နယ် ၊ ပြည်မြို့နယ် ၊ တောင်ငူမြို့နယ် များအပြင် အခြားမြို့နယ်ရှိအိမ်ခြံမြေရောင်းရန် ၊ ဝယ်ရန် ၊ ငှားရှိသည် များကို imyanmarhouse.com တွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ။